Karim Benzema oo Sameeyay Rikoodh Safashadii ugu Fiicnayd Kulamo Isku Xiga Waayihiisa Real | Himilo Media Group
Waxaa cad in tababaraha cusub ee Real Madrid Julen Lopetegui uu Karim Benzema uga dhigan yahay mid ka mid ah furayaasha kooxda, maadaama xiddigaan heerka caalami ahi uu ciyaaray 390 daqiiqo afar kulan oo ay kooxdiisa dhamaan tartamada rasmiga ah ciyaartay.
Waxey soo bilaabatay arrintan 15-ka August markii uu xiddiga reer France ciyaaray waqti buuxa kulankii ay guuldarada kala kulmeen Atletico Madrid, ciyaartii final-ka koobka UEFA Super Cup, sidoo kale sadexdii kulan ee horyaalka La Liga ayuu si toos ah ugu soo bilowday.
Kulankii ugu horreeyay La Liga wuxuu ciyaaray 90-daqiiqo, si la mid ah kulankii ugu dambeeyay ee Girona, labadii kulan ee ugu dambeeyay waxey ka siman yahiin inuu min 2-gool dhaliyay, waana midda keentay inuu Lionel Messi kula midoobo booska ugu sarreeya tartanka gooldhalinta La Liga.
Karim Benzema waa markii ugu horreysay uu ciyaaro 90-daqiiqo oo dhameystiran afar kulan oo xidhiidh ah tan iyo markii uu soo gaadhay Santiago Bernabeu, waxaa loo diiwaan galiyay rikoodh kaliya sheegaya inuu saddex kulan oo xidhiidh ah dhameystay sanadka hor waqtigii Zidane.
Xaqiiqdii waxey markaas aheyd inuu afar kulan oo xidhiidh ah saddex ka mid ah dhameysto, balse markaan waa 4-kulan oo xidhiidh ah taasoo muujineysa sida uu waqtigan cusub kooxda muhiim ugu noqday.
: “Aad ayaan ugu taageeri doonaa inuu ku guuleysto abaal marintan, tan iyo wax qabadkiisa cajiibka ahaa uu ka sameeyay xili ciyaareedkii lasoo dhaafay”.